တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: May 2007
ဒီကနေ့ ကျမသုံးနေကျ ကွန်ပျူတာ ပျက်သွားလို့ ဆိုင်ကိုသွားအပို့ မိုးတွေအရမ်းရွာနေချိန်နဲ့ တိုးပါတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာ ရေတွေက တဖွေးဖွေး၊ ပျက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာကြီးပိုက်ပြီး အငှားကားပေါ်မှာ ငေးရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ တွေးနေမိတယ်။ ဒီကနေ့ မေလ ၃၁ … ပဲ။ မေကို နှုတ်ဆက်တဲ့ မိုးက ဆိုးလှချည့်လို့ စိတ်ထဲ မချိတင်ကဲနဲ့၊ ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်မှာ စက်ကိုအပ်ပြီး အိမ်မပြန်သေးဘဲ မိုးရေထဲ လျှောက်သွားနေမိတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းတလျှောက် ရေတွေပြည့်လို့။ လမ်းပေါ်ကရေတွေ မသန့်ဘူး၊ ညစ်ပတ်တယ်။ ကောင်းကင်က ရေတွေကရော … လုံးဝသန့်စင်ပါရဲ့လား။ ကျမ မသိပါဘူး။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ မိုးလည်း တိတ်ပြီပေါ့။ စာလည်း မရေးချင်ဘူး။ ဘလော့လည်း မဖတ်ချင်ဘူး။ ညစ်တစ်တစ်နဲ့ နေနေရာက … ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားရင်း ကိုပုထုဇဉ်ရဲ့ “မေလနိဒါန်း” ကဗျာကို ဖတ်လိုက်မိတယ်။ သူ့ကဗျာက အားမာန်အပြည့်ပဲ။
ကျမက အားနည်းနေတယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ယိမ်းယိုင် မခိုင်မာချင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ … ဒီကဗျာတပုဒ် ရေးဖြစ်သွားတယ်။ သူက နိဒါန်းပဲ ရှိသေး .. ကျမက နိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီပေါ့။
အဆုံးသတ်ရစ်ပေတော့ …မေ … ။
ရဦးမတဲ့လား … ။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် … ဆိုပြီး
မတ်တပ်ရပ်လို့ လမ်းမှာ မငိုမိပေမဲ့
သုံးဆယ့်တစ် …မေ … ။
၃၁၊ မေ၊ ၂၀၀၇
ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်
(သရုပ်ဖော်ပုံကလေးကို “ဒီနေရာ” က ယူသုံးထားမိပါတယ်။)
Posted by မေဓာဝီ at 2:59 PM5comments
ဒီကနေ့ မေလ ၃၀-ရက်နေ့ (နယုန်လပြည့်နေ့) ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် တရက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟာ နယုန်လပြည့်နေ့မှာ ကပိလ၀တ်ပြည် မဟာဝုန်တောထဲမှာ မဟာသမယသုတ်တော်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ အတွက် ‘မဟာသမယနေ့’ လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ကပိလ၀တ်ပြည်က လယ်သမားတွေနဲ့ ကောလိယပြည်က လယ်သမားတွေဟာ ရောဟိနီမြစ်ရေကို အကြောင်းပြုပြီး ရေလုပွဲကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လယ်သမားတွေကနေ စစ်သည်တော်တွေ မင်းညီမင်းသားတွေပါ ရေလုပွဲမှာ ပါဝင်လာကြပြီး နှစ်ပြည်ထောင်သားတွေဟာ လက်နက်အသီးသီး စွဲကိုင်လို့ ရောဟိနီမြစ်အနီး ရောက်လာကြကာ စစ်ဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရား ရောက်ရှိလာပြီး နှစ်ပြည်ထောင် ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကို အောက်ပါ သာဓကအမျိုးမျိုး ပြကာ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
၁) ၀က်ဝံနဲ့ ရုက္ခစိုးနတ်တို့ ရန်ငြိုးဖွဲ့မှားလို့ နှစ်ဦးစလုံး ပျက်စီးကြပုံ။
၂)မြေပြိုပြီ အထင်နဲ့ အော်ဟစ်ထွက်ပြေးတဲ့ ယုန်တကောင်ရဲ့ စကားကို ယုံမှားမိလို့ တိရစ္ဆာန်အများအပြား ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရပုံ။
၃) အားနည်းသော နှံပြည်စုတ်ငှက်မက အားကြီးသော ဆင်ပြောင်ကြီးကို အနိုင်ယူဖူးလို့ ရန်သူကို အထင်မသေးသင့်ပုံ။
၄) ငုံးငှက်တွေဟာ ညီညွတ်စဉ်အခါက ရန်သူလက်မှ လွတ်မြောက်ပေမယ့် စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး အချင်းချင်း မညီမညွတ် ဖြစ်တဲ့အခါမှာ မုဆိုးရဲ့ ပိုက်ကွန်တွင်းမှာ အမိခံရပုံ။
၅) သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ သစ်ပင်များပင် တစုတဝေးတည်း တည်နေတဲ့အခါမှာ လေဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ပုံ။
၆) မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဆုံးမသင့်ပုံ ….
စတဲ့ သာဓကများနဲ့ ဟောကြားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ကို နာကြားရတဲ့ နှစ်ပြည်ထောင်သားတွေဟာ တောက်လောင်နေတဲ့ ဒေါသမီးတွေ ကင်းငြိမ်းသွားပြီး လက်နက်တွေစွန့်ပယ် လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတနိုင်ငံက မင်းသား ၂၅၀ စီ၊ စုစုပေါင်း နှစ်ပြည်ထောင်မှ မင်းသား ၅၀၀ တို့ဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တပည့်သား သံဃာအဖြစ် ရဟန်းပြု လိုက်ကြပါတော့တယ်။
ရဟန်းငါးရာလုံးဟာ မဟာဝုန်တောကြီးထဲမှာ တရားအားထုတ်ရင်း ရဟန္တာတွေဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်လျှောက်ထားဖို့ နယုန်လပြည့် ညချမ်းမှာ ဘုရားထံတော်မှောက်ကို စုရုံး ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ အဲဒီလို ရဟန္တာသံဃာတော် ငါးရာ စုဝေးရောက်ရှိမှာကို ကြည်ညိုလိုကြတဲ့ နတ် ဗြဟ္မာတွေ နဂါး ဂဠုန်တွေဟာလည်း မဟာဝုန်တောထဲကို စုရုံးရောက်ရှိလာကြပြန်ပါတယ်။
နယုန်လပြည့်နေ့မှာ နတ်ဗြဟ္မာတွေ နဂါး ဂဠုန်တွေ စုရုံးစည်းဝေးမိတဲ့ အချိန်အခါမို့ မဟာသမယ လို့ ခေါ်ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါသတဲ့။ နတ် ဗြဟ္မာတွေရဲ့ အမည်နာမ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဖော် မြွက်ကြား နှုတ်ခွန်းဆက်သော အားဖြင့် မိန့်ကြားတဲ့ စကားတော်များကို မဟာသမယသုတ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မဟာသမယသုတ်တော်ကြီးကို ဟောကြားပြီးနောက်မှာ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ စရိုက် ၆-မျိုးအလိုက် သုတ်တော် ၆-သုတ် ကို ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီကနေ့ဟာ ကျမတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လို့ ဆိုရင် မမှားဘူး ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကမ္ဘာမှာ လိုအပ်နေတာလည်း ညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို … ဘယ်လူမျိုးမဆို … ဘယ်သတ္တ၀ါမဆို ညီညွတ်မှ ငြိမ်းချမ်းမယ် .. ငြိမ်းချမ်းမှ သာယာမယ် … မဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး သတ္တ၀ါအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်။
မဟာသမယံ ဒေတု သော၊
မဟာသမယ သမ္ပန္နော၊ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ် ညီညွတ်စည်းလုံးသော တပည့်သာဝကတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ မဟာသမယ ဒေသကော၊ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ် ညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းငှာ အခါခပ်သိမ်း တရားဓမ္မကို ဟောပြဆုံးမ တော်မူတတ်သော။ သောဗုဒ္ဓေါ၊ မဟာသမယ ဒေသကမည်တွင် ထိုဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်။ မဟာသမယ အတ္ထိနော၊ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ် ညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းကို အလိုရှိသော အကျွန်ုပ်အား (အကျွန်ုပ်တို့အား)။ မဟာသမယံ၊ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ် ညီညွတ်စည်းလုံးကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းကို။ ဒေတု၊ ကရုဏာထား မေတ္တာပွား၍ ပေးသနားတော်မူပါ အရှင်မြတ်ကြီး ဘုရား။ … ။
သတ္တ၀ါအားလုံး ညီညွတ် ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ …
၃၀၊ မေ၊ ၂၀၀၇
(၀န်ခံချက် ။ … ။ မာဂဓီ (သာစည်) ၏ အခါတော်နေ့များ စာအုပ် မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မေဓာဝီ at 4:09 AM 1 comments
ဒီနေ့မနက် မိုးလေကင်းစင်ပြီး ရာသီဥတုသာယာတာနဲ့ မနက် ၆ နာရီခွဲသာသာလောက်မှာ မှော်ဘီမြို့နယ် ၀ါးနက်ချောင်းကျေးရွာစု အပိုင် ပန်းတပွင့်တောင် ဘုရားဆီ သွားဖို့ ကျမတို့ မိသားတစု အိမ်ကထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပန်းတပွင့်တောင်ဆိုတာ မှော်ဘီမြို့အ၀င်ကနေ လေထီးတပ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ လမ်းခွဲအတိုင်း တော်တော်လေး ၀င်ရပါတယ်။ သားငါးးယူလို့မရဘူး သက်သတ်လွတ်ပဲ စားလို့ရတာကြောင့် မနက်ကတည်းက ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ နှမ်းထောင်း၊ ပဲပြုတ်နဲ့ အကြော်၊ မြေပဲကြော်၊ ပဲပုတ်ကြော်စတဲ့ စားသောက်စရာတွေ သယ်သွားကြတယ်။
မိုးရာသီပေမယ့် မိုးသိပ်မကြီးသေးတဲ့ အချိန်မို့ လမ်းက သာပါတယ်။ မိုးသိပ်ကြီးရင် လမ်းတွေပျက်ပြီး ကားသေး သွားမရဘူး။ သူက ဖူးကြီးရေလှောင်တမံ အနားမှာပါ။
ဒါက ပန်းတပွင့်တောင် ဘုရားကို တက်ရမယ့် အ၀င် မုခ်ဦးပေါ့။
ဆရာတော်ရဲ့ စံကျောင်းပါ။ ဆရာတော်ကို လှူဖွယ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ ဦးခိုက်ကန်တော့ပြီး တောင်ပေါ်က ဘုရားဆီ တက်ခဲ့ကြတယ်။
အခုတော့ ဒီဘုရားက ထီးတင်ပြီးပါပြီ။ ဒီပုံက ထီးတော် မတင်ခင်က ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။
တောင်တိုင်းမှာ ခုလို စေတီတဆူစီ ရှိပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းက အဲဒီလို မြေလမ်း။ တောင်တက်လမ်းမှာ ကားက ပြန်လျှောကျလို့ လူတ၀က်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်တက်ရတယ်။
ဟိုဘက်တောင်ပေါ်က နဂါးရုံဘုရားကို ပန်းတပွင့်တောင်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ပုံ။
နဂါးရုံဘုရား ပကတိမြင်ကွင်း။ ဒီတခေါက်တော့ ကားနဲ့ တောင်ပေါ်ကို တက်လို့မရခဲ့ဘူး။ လမ်းတ၀က်မှာ ကားက သစ်ငုတ်နဲ့ငြိပြီး ပြန်ဆင်းမရလို့ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ လုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။
တောင်ပေါ်က စေတီရဲ့ မုခ်လေးမုခ်မှာ ကျမတို့ လှူထားတဲ့ ကျောက်ဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်။
ပန်းတပွင့်တောင် ဆရာတော်က အနီးအနားရွာက ကလေးတွေကို အခမဲ့ပညာ သင်ကြားပေးပါတယ်။ ခုကတည်းက ကျောင်းဖွင့်နေပြီ။ စာအံသံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့။ ဒီနှစ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၇၀၀ကျော် ရှိမယ်လို့ ဆရာတော်မိန့်ကြားခဲ့တယ်။
မုခ်လေးမုခ်က ရုပ်ပွားတော်တွေကို ပါလာတဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ရေချမ်းကပ်၊ လမ်းက၀ယ်လာတဲ့ ပန်းတွေနဲ့ ဖယောင်းတိုင် အမွှေးတိုင်တွေ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး ကျမတို့လည်း ဘုရားရှိခိုး ခဏတဖြုတ် နားနားနေနေ နေပြီးနောက် ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း နားတောင် မနားဘဲ ဘလော့မှာ အမြန်လာတင်လိုက်တာပါ။ ဒီကနေ့ ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု အဖို့ဘာဂကို ကျမဘလော့ဖတ်သူ အပေါင်းအား အမျှပေးဝေပါတယ်ရှင်။
၂၉၊ မေ၊ ၂၀၀၇
နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၀
Posted by မေဓာဝီ at 8:00 AM 11 comments
၂၈၊ မေ၊ ၁၉၉၅
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ် ဒီလိုနေ့မှာ ဘွားဘွား (အဖေ့မိခင်) ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
၁၂ နှစ်ဆိုတာလည်း တကယ်တော့ မကြာလိုက်သလိုပါပဲ။ တခါတလေကျ … ဘွားဘွား ရှိနေသေးသလို … ထင်မိသေးတယ်။ ဘွားဘွားအကြာကြီး နေသွားခဲ့တဲ့ မေမြို့က ငွေစန္ဒာ အိမ်ကြီးကို လိပ်မူပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကလို စာပို့ချင်သေးတယ်။ ဘွားဘွားရဲ့ မညီမညာ လက်ရေးလေးတွေနဲ့ စာလေးတွေကို ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
ခုဆို … ဘွားဘွား ဘယ်များ ရောက်နေမှာပါလိမ့်။
ဘဘ (အဘိုး) က ၂၃၊ မေ၊ ၁၉၈၃ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ … ဆိုတော့ ဘွားဘွားနဲ့ နှစ်အားဖြင့် ၁၂ နှစ် ကွာပေမယ့် ရက်အားဖြင့် ၅ ရက်ပဲ ကွာတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းကျွေးရင် ဘဘနဲ့ ဘွားဘွား ကို တရက်ထဲ တူတူ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒီကနေ့ အဘိုးအဘွား ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်အဖြစ် ခြောက်ထပ်ကြီးမှာ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကျွေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးရှင် ဘိုးဘွားတွေကို မမေ့ကောင်းဘူး မဟုတ်လား။
အဲဒီအဘိုးနဲ့ အဘွားကတော့ အဖေ့ဘက်ကပေါ့။
အမေ့ဘက်က အဘိုးနဲ့အဘွားလည်း ဒီလိုပါပဲ။ နှစ်တွေသာ ကွာခြားပေမဲ့ အဘွားက ဇူလိုင် ၁၉၊ အဘိုးက ဇူလိုင် ၁၇ .. ရက်အားဖြင့် ၂ ရက်ပဲ ကွာခဲ့တယ်။ သူတို့ နှစ်လည်ဆိုလည်း အဲဒီ ၂ ရက်ထဲက တရက်ရက်မှာ အတူတူ လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။
ဒါကြောင့် စဉ်းစားမိတယ်။ ရှေးရှေးက ရေစက်ပါလို့ ဒီဘ၀မှာ လာရောက်ဆုံဆည်းကြတဲ့ ဖူးစာဘက်တွေဟာ … ဒီလိုပဲလား… လို့။ သေတာတောင် ရက်ချင်း နီးနီးကပ်ကပ် သေကြရတယ်။
နောက်ဘ၀တွေမှာလည်း သူတို့ ရေစက် ဆုံကြလေဦးမလား … သိချင်စမ်းပါဘိ။
ဒီနေ့ စာရှည်ရှည်ရေးချင်ပေမယ့် … စိတ်ထဲ မကောင်းလို့ ဒီလောက်ပဲ ရေးလိုက်နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါတော့။
၂၈၊ မေ၊ ၂၀၀၇
နေ့လယ် ၂ နာရီ ၁၅
Posted by မေဓာဝီ at 8:41 AM 1 comments
… … …. …. … … … …
မနက်က အွန်လိုင်းက သတင်းတွေ ဖတ်နေရင်း … စိတ်နောက်ကျိလာလို့ ပြတင်းပေါက်ကိုသွားရပ်နေမိတော့ ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို တွေ့ရတယ်၊ ကုလားလူမျိုးတွေ၊ မြန်မာပြည်သားတွေပါပဲ။ သူတို့က ပလင်းခွန်၊ ပစ္စည်းဟောင်း တွေ့တာ အားလုံးကောက်တယ်။ သမီးလေးက ၅-နှစ်လောက်၊ အမေက ၃၅-လောက်၊ သူတို့မှာ သုံးဘီးတပ် လက်တွန်းလှည်း အသေးလေးတစ်ခုနဲ့၊ လက်တွန်းလှည်းလေးပေါ်မှာ ထီးတစ်ချောင်း ဖွင့်တင်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ အိမ်ဘေးအိမ်က ရဟန်းခံအလှူ လုပ်တယ်။ အလှူ အပြီးဆိုတော့ ပက်စီပလင်း၊ ဘီယာပလင်း၊ အရက်ပလင်းခွံတွေ အိမ်ရှေ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ်။ သူတို့က အလှူမဏ္ဍပ်ထဲမှာကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် အရက်နဲ့ ဧည့်ခံကြတာ။ ကျနော်တို့ဆီနဲ့ ဓလေ့မတူဖူး။
ပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ သားအမိ အိမ်ရှေ့ကို ရောက်လာတော့ ၀မ်းသာအားရ ပလင်းခွံတွေကို လိုက်ကောက်တယ်။ ခြံထဲအထိ လိုက်ကောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးရွာချလိုက်တော့ ကလေးထငိုတယ်။ လက်တွန်းလှည်းလေးထဲမှာ ကလေးလေး ပါလာတာကိုး။ အမေလုပ်တဲ့သူက ထီးကို ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့လုပ်ပီး ကလေးကို မိုးလွတ်အောင် လုပ်တယ်။ ကလေးက ဆက်ငိုနေတယ်၊ သူ့အမေက ကောက်ချီလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အကြီးမလေးက ခြံထဲမှာ ပလင်းခွံတွေ လိုက်ကောက်နေတယ်၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ နှစ်လုံးရတော့ မနိုင်မနင်းနဲ့ သူ့အမေရှိရာကို ဆွဲသွားတယ်၊ ကောင်မလေးမှာ ဖိနပ်မပါဖူး၊ အုပ်ထုတ်လည်းမပါဖူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ရှင်ကောင်လေးနဲ့ မဏ္ဍပ်ဖျက်ပီး နားနေတဲ့ လူငယ်တစ်သိုက် သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ သားအမိကို လှမ်းအော်ကြတယ်၊ အဓိပါယ် မသဲကွဲပေမဲ့ မလိုလားကြောင်း ထင်ရှားတယ်။
ကောင်မလေး သားအမိ ထပ်ပီး မကောက်ရဲတော့ဖူး၊ ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့်နဲ့ ကြည့်နေကြတယ်။ ထီးကလေးက သူတို့သားအမိကို မိုးလုံအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူး၊ ကျနော် အတွေးနယ်ချဲ့နေမိတယ်။ အိမ်ရောက်ရင် သူတို့သားအမိ တစ်ယောက်ယောက်ဖျားမလား၊ ဆေးကုဖို့ ပိုက်ဆံရှိရဲ့လား။ လက်မှတ်မရှိရင် ဆရာဝန်က ကုပေးမှာမဟုတ်ဖူး၊ ဒီကြားထဲမှာ အိမ်အပြန် သို့မဟုတ် ဆေးခန်းအသွား ရဲဖမ်းသွားခဲ့ရင် … ။
ကျနော့်စားပွဲကို ကျနော်ပြန်လာလိုက်တယ်၊ ကျနော့်ကွန်ပြူတာကို ကိုင်လိုက်ဖို့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်တယ် … ကျနော့်ကွန်ပြူတာက ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ထားရတာ၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ ငတ်နေကြတယ်။
မေ - မနက်က ကျနော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို မေနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်၊
ကျမဆီ ရောက်လာတဲ့ စာတစောင်ပါ။
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ကျမစိတ်ထဲ ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းသလို … ဆို့နင့်နင့် ဖြစ်နေမိတယ်။
ကျမ … ဘာလုပ်ပေးရမလဲ … ။
ကျမ ….. ဘာလုပ်ပေးတတ်သလဲ …. ။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ ငတ်နေကြတယ်” တဲ့ … ။
ဘာကြောင့်လဲ … ????
နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်တပြည်မှာ ပြည်သူလူထု ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်ရတာဟာ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူ အသုံးမကျလို့ပဲ မဟုတ်လား။ အထူးသဖြင့် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံက တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခ မရောက်သင့် အောက်တန်း နောက်တန်း မကျသင့်တာ အမှန်ပါ။
ကျမ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။
လူတယောက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်သွားရင်း ခလုတ်တိုက်ပြီး ချော်လဲရင်လည်း … တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အပြစ်ပဲ … လို့ ပြောလို့ရသတဲ့။
“ဘာကြောင့်လဲ …” ကျမက ဇဝေဇ၀ါ ပြန်မေးတော့ … သူက ရှင်းပြတယ်။
“ဟုတ်တယ်လေ … သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက လူသွားလမ်း ပလက်ဖောင်းကို ညီညီညာညာ ပြေပြေပြစ်ပြစ် လုပ်ထားရင် အဲဒီလို ခလုတ်တိုက်ပြီး ချော်လဲမှာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒါကြောင့် ….”
နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်က မကြည့်ဘဲ ဘာသာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ …. ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ဆင်းရဲတာ … ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာ လို့သာ ဆိုရမှာပါပဲ။ ကံ - ကံ၏ အကျိုး ဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်က အတိတ်တုန်းက မကောင်းတာတွေ ပြုမိမှားခဲ့လို့ မကောင်းကျိုးကို ခံစားရတာပဲ။ လက်ရှိ ကောင်းတာလုပ်ပါမှ ..နောင်အနာဂတ်မှာ ကောင်းကျိုးခံစားရမှာပေါ့။ ဒါဆို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အပြစ်တင်စရာ မလိုတဲ့အပြင် ပိုပြီး လက်တွေ့ကျတယ် လို့ ကျမခံယူထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ သူ့ဆီ ခုလို စာပြန်ရေး လိုက်တယ်။
… … …. …. …..
ပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ မိသားစုအကြောင်း ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ လူတွေရဲ့ ဘ၀က အမျိုးမျိုးပဲနော်။ ကံတွေက အမျိုးမျိုးရှိလို့ ဘ၀တွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိတာ ထင်ပါရဲ့။ တယောက်နဲ့ တယောက် ကံချင်းက မတူကြဘူး မဟုတ်လား … ။
ကိုယ့်အောက် နိမ့်ပါးတဲ့သူတွေကို တွေ့ရင် သူတို့ကို ဒီလိုဘ၀မျိုးက လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင် မလဲလို့ ကိုယ်လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။ လက်ရှိ ဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ ဘ၀က ချက်ချင်း လွတ်မြောက်အောင် လုပ်မပေးနိုင်ရင်တောင် နောက် ဘ၀တွေ ဘ၀တွေမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ထပ်မရောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာက ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ပဲ ရှိတယ်လေ။ ဒါတွေ သူတို့သိအောင် လုပ်ပေးရမယ် မဟုတ်လား။ အနည်းဆုံးတော့ သီလလုံခြုံဖို့ပေါ့။
“အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား အမှားကြီးကိုလည်း ပြင်ချင်သေးတယ်။ တကယ်တမ်းက သီလစောင့်တဲ့သူအတွက် အူမ-တောင့်ပါတယ်။ သီလစောင့်ထိန်းသူ အတွက် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ခုလုံးမှာ အကျိုးရှိတယ်။ နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ ဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒါတွေကို သူတို့သိအောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲ … ။
(ပေးစာကို စာထဲမှာပါတဲ့ စာလုံးပေါင်းအတိုင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)
Posted by မေဓာဝီ at 3:59 AM 11 comments
မပြိုင်သူကို ဖိနင်း …
ဒင်း တို့တတွေ …
…. ….. …...
“ … …. …. ”
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲလား …
ပြုသူများက အသစ် …
ဖြစ်သူများက အဟောင်းတဲ့ …
ငါတို့ ဆုတောင်းကြပါစို့လား …
အားလုံး ရင်ထဲကဆုတောင်း …
တောင်းတဲ့ဆု ပြည့်ပါစေသား … ။
ထာဝစဉ် လင်းလက်စေသား … ။
ကမ္ဘာကို ထွန်းလင်းစေသား … ။
အပူမီးများ ဝေးစေသား … ။
.… .… …. …. ….
စိတ်ထဲမှာ ခံစားမှုတွေ ရောထွေးနေလို့ ညက စာလည်း မရေးနိုင်ခဲ့ဘူး၊
မနက်မိုးလင်းမှ ဒီ ခပ်ချာချာ ကဗျာလေးတပုဒ်ကိုပဲ ရင်နာနာနဲ့ ရေးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်လည်း မတပ်ချင် … အဆုံးလည်း မသတ်ချင် …
၂၆၊ မေ၊ ၂၀၀၇
နံနက် ၉ နာရီ ၂၅
Posted by မေဓာဝီ at 4:02 AM9comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:24 AM7comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:08 AM3comments
မေလမှာ ကျမနဲ့ ပတ်သက်သူ တော်တော်များများရဲ့ မွေးနေ့တွေ ရှိနေပါတယ်။
မေလ ၁-ရက် .. အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း မန္တလေးသူ နီလာမြင့်။ (ကွဲကွာသွားခဲ့တာ ကြာပါပြီ၊ ဘယ်များရောက်နေလဲ မသိ)
မေလ ၄-ရက် .. ကျမလေးစားပြီး ကျမကို ဆုံးမနေကျ ဆရာမ ဒေါ်မေလေးဆွေ။ (ဆရာမ မွေးနေ့တုန်းက ဖုန်းတောင် မဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူး၊ ခွင့်လွှတ်ပါ ဆရာမ)
မေလ ၅-ရက် .. ကျမနဲ့ အဝေးတနေရာမှာ ရောက်နေပြီး ချစ်ကြောက် ရိုသေရပါသော ကျမအဒေါ်။ (နောက်ကျပြီးမှ မေးလ်နဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ရတယ်)
မေလ ၁၀-ရက် .. ကျမနဲ့ အနီးမှာရှိနေပြီး ကြောက်လို့ အမြဲခပ်ခွါခွါနေမိတဲ့ ကျမ အစ်မကြီး။
မေလ ၁၂-ရက် .. ကျမနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရှိပြီး ကျမအောက် ငယ်ပေမယ့် အကိုတယောက်လို ဆရာအမြဲလုပ်တတ်တဲ့ ကျမရဲ့ မောင်လေး။
(သူတို့ ၂ ယောက်ပေါင်းရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို အိမ်မှာပဲ ဘုန်းကြီး ၄၅ ပါး ဆွမ်းကျွေးလိုက်ပါတယ်။ မောလိုက်တာ)
မေလ ၂၃-ရက် .. ဒီကနေ့ ကတော့ …
ကျမဘက်က အမြဲရပ်တည်ပြီး ကျမ စိတ်ညစ်ခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို မျှဝေခံစား နားလည်ပေးတဲ့ ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး …. ကိုသံလွင် (ခေါ်) ကိုစေးထူး။
မွေးနေ့ရှင်ကို သောကတွေ ကင်းစေလိုတယ်။ အားလုံးအပေါ်မှာ တူညီမေတ္တာ ထားစေချင်တယ်။
ထစ်ခနဲဆို စိတ်တိုတတ်သူမို့ စိတ်အခန့်မသင့်မှုမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ သည်းခံစေချင်တယ်။
မကောင်းခြင်းတွေ ကင်းဝေးပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာတွေ ရရှိခံစားကာ လိုရာပန်းတိုင်ကို ဆက်လက် ချီတက်စေချင်ပါတယ်။
သူ့အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာ မှာတမ်း ကဗျာတပုဒ် ရေးဖွဲ့ပြီး ကျမ ဘလော့မှာ အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်။
မှာတမ်းဆိုချင်၊ အသင်မိတ်ဆွေ …
ရွှင်လန်းပါစေ၊ ငြိမ်းအေးစေသား …
စေတနာကဲ၊ လုံ့လဇွဲဖြင့် ….
…. …. ….. …… …… အားခဲ ချီတက်နိုင်စေသား။
၂၂၊ မေ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁ နာရီ ၃၅
(ဒီမေလမှာပဲ မွေးနေ့တွေကျရောက်တဲ့ ကျမရဲ့ အွန်လိုင်း မောင်နှမများဖြစ်ကြသော လလေး (ခ) နွယ်မာ (၉-ရက်)၊ အောင်ဘု (၁၀-ရက်)၊ ပါစီတူး နှင့် သာလိကာ (၂၁-ရက်) တို့ကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ … ။
အလွန်စာရေးကောင်းသော ဘလော့ရေးဖော်ရေးဖက် ပန်ဒိုရာ (မေလ ၂-ရက်) ကျန်ခဲ့သည့်အတွက် ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။ ပန်ပန် တယောက် ကျန်းမာ ရွှင်လန်းစွာဖြင့် ဘလော့စာများ ဆက်လက်၍ ဖန်တီးရေးသားနိုင်ပါစေ … ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:38 AM3comments
အုံ့မှိုင်းနေသော ကောင်းကင်က စိတ်အလိုမကျသည့် အပျိုမ၏ မျက်နှာထားနှယ် တသုန်သုန် တမှုန်မှုန်။ ကောင်းကင်က သုန်မှုန်နေတော့လည်း ၀န်းကျင်တခွင်လုံးက ရှုလေတိုင်း ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်း မှိုင်းမှိုင်းပျပျ။ ခြေခင်းလက်ခင်း မသာလှသော ဒီညနေမှာမှ အပြင်ထွက်ရန် အကြောင်းက ဖန်လာတာမို့ ဆောင်းနေကျ ထီးကလေးကို ဆွဲကာ အိမ်မှ ထွက်ခဲ့ရလေ၏။ အိမ်မှ ထွက်ခါစကတော့ မိုးက မရွာသေး။ တလှမ်းနှစ်လှမ်း လျှောက်ခါမှ မိုးစက်တွေတဖွဲဖွဲ ရွာကျလာတော့သည်။
သွားရမည့်ခရီးက သိပ်တော့ မဝေးလှ။ အိမ်မှ လမ်းလျှောက်လျှင် အလွန်ဆုံး ၁၅-မိနစ်မျှသာ။ အငှားကားလည်း စီးရန်မလိုအပ်၊ ဆိုက်ကားဖြင့်လည်း မသွားချင်သဖြင့် လမ်းပဲလျှောက်မည်ဟု စိတ်ကူးပြီး ထွက်ခဲ့သည်။ မိုးက ဖွဲရာမှ တဖြည်းဖြည်း သည်း၍လာချေပြီ။ ကားလမ်းမထက်မှာ ရေတွေတဖွေးဖွေး။ ကလေးတချို့ မိုးရေထဲ ပြေးလွှား ကစားနေကြသည်။ မိုးကာခြုံထည် ၀တ်ဆင်ထားသော ဆိုက်ကားနင်းသူတဦး သည်းထန်နေသော မိုးကိုဆန်ကာ အားစိုက်နင်းနေ၏။ ထိုဆိုက်ကားပေါ်မှ ကျောချင်းကပ် ခရီးသည် နှစ်ဦးကတော့ ထီးတချောင်းတည်းနှင့် မလုံမလဲ စိုစိုရွှဲနေကြပြီ။
လူသွား ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ စည်ပင်သာယာမှ တက်စိုက်ထားသော ရေတမာပင်ပျိုလေးတွေက လေအထန် မိုးအဝှေ့မှာ လှုပ်ယမ်း ခါတိမ်း ယိမ်းတနွဲ့နွဲ့။ ဒီသစ်ပင်တွေကို ရှောင်ရင်း၊ ရေအိုင် ရွှံ့ဗွက်တွေကို ကျော်လွှားရင်း ကွဲအက် ယိုယွင်းနေသော ပလက်ဖောင်းခင်း များပေါ် သတိထားလျှောက်နေရင်းက စီးထားသည့် ကတ္တီပါဖိနပ် တခုလုံး မိုးစွတ်ကာ ရွှတ်စိ ရွှတ်စိ ဖြစ်လို့နေ၏။ ဒီကြားထဲ ခြေခုံပေါ်ကို သဲမှုန်တွေက ခုန်ခုန် တက်ကြသေးသည်။ မိုးတွင်းဘက် အပြင်ထွက်တာ ကတ္တီပါ ဖိနပ်စီးတော့လည်း ဒီိလိုပဲ ဖြစ်ပေတော့မပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း လူကြီး သူမတွေက … “ဒီခရီး ဒီထီးနဲ့၊ ဒီအရပ် ဒီဖိနပ်နဲ့” … လို့ ပြောခဲ့သည်ပဲ ဖြစ်မည်။ ဘယ်အရာမဆို သူ့နေရာနှင့်သူ အသုံးချမှလည်း အဆင်ပြေနိုင်မည် မဟုတ်လား။
ကားတစီးက ၀ီးခနဲ ကပ်ဖြတ်သွားသဖြင့် ရေစက်တွေစင်ကုန်သည်။ လုံချည်အောက်ဖျားပိုင်းက မိုးရေထိလို့ ကပ်တပ်တပ်ဖြစ်နေသဖြင့် ခြေလှမ်းတွေက တုံ့ဆိုင်းတုံ့ဆိုင်း။ လေရိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း တိုက်လိုက်သောကြောင့် လေလာသည့်ဘက် ထီးကို ဦးတည်ကာ မြဲမြဲဆုပ်ကိုင် ထားလိုက်ရ၏။ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် နဂိုက မခိုင်သည့် ထီးခရိုင်တွေက ညွတ်ကယ် ညွတ်ကယ်။ လျှောက်နေရင်း မိုးရောလေပါ သည်းထန်လာပြန်တာမို့ လမ်းလျှောက်ရတာ နှေးကွေးပြီး ခရီးက သိပ်မတွင်လှ။ စက်ဘီးတစီးနှင့် အမျိုးသမီးတယောက် မိုးကာမပါ ထီးမပါဘဲ မိုးတွေထဲမှာ သွားနေတာကို မြင်ရ၏။ ဒါလည်းပဲ တမျိုးအကောင်းသား၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသည့် ထိုမိန်းမသူကိုပင် အားကျမိသေးသည်။ မျက်နှာနှင့် ဆံပင်တွေ ရေစိုရွှဲနေပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ အပူအပင် ကင်းလွန်းပေစွ။
ကြည့်နေရင်း စက်ဘီးကလွန်သွားပြန်သည်။ လမ်းတလျှောက်က ဆိုင်တန်းကလေးတွေရဲ့ အမိုးစွန်းအောက် ခရီးသွားတချို့ မိုးခိုနေကြသည်။ မိုးခိုနေသော လူတွေကိုကြည့်ရင်း ငှက်ကလေးတွေလည်း ဘယ်ရောက်နေကြပါလိမ့် … ဟု ပူပန်နေမိပြန်သေး၏။ သည်စဉ်မှာပဲ ဆောင်းထားသည့်ထီးက မိုးရေစက်တွေ တပေါက်ပေါက် ကိုယ်ပေါ်သို့ ကျလာလေသည်။ ထီးရွက်ကပါး၊ ထီးခေါင်က မလုံတော့ မိုးကြီးတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်သဖြင့် တစက်စက် ယိုကျလာ ခြင်းပင်။ ခေါင်ကမလုံပြီဆိုမှဖြင့် … ဒီထီးက ဘယ်လိုလုပ် အသုံးကျတော့မှာလဲ။ မိုးသည်းလာလေ မိုးစက်တွေက ပိုယိုကျလာလေ။ ခေါင်တည့်တည့်က ယိုကျသည့် ဒီမိုးစက်တွေကို ဘယ်ညာယိမ်းပြီး တိမ်းရှောင်လို့လည်း မရ။ ယိုကျလာသည့် မိုးရေတွေက ဦးခေါင်းပေါ်၊ ပုခုံးပေါ်၊ လက်ပေါ်။ တစက် ပြီးတော့ တစက် …နောက် တစက်စက် ။
ဆက်လက် လျှောက်နေစဉ်မှာ ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းက အမျိုးသမီးကြီး တယောက် ထီးမပါ ဘာမပါ ခေါင်းပေါ်မှာ တစုံတခုတင်ပြီး အပြေးတပိုင်း လျှောက်နေသည်ကို မြင်ရ၏။ ဒီ့နောက်တော့ စက်သုံးဆီတွေကို တရားမ၀င် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရောင်းသည့် လမ်းဘေး ဆိုင်ကလေး တဆိုင်၏ အမိုးအောက် ၀င်ရောက် မိုးခိုသွားသည်။
“တူမကြီးရေ … အဒေါ် ထီးမပါလို့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါရစေ”
ထိုဆိုင်ရှေ့မှ ဖြတ်ကျော်အသွားမှာ သူကပြေးထွက်လာပြီး ထီးရိပ်လာခိုလေ၏။
“ဟုတ်ကဲ့ … အဒေါ်က ဘယ်သွားမှာလဲ”
ဒီလိုနဲ့ ယိုင်တိယိုင်ထိုး ကျိုးမတတ် ထီးကလေးဖြင့် နှစ်ကိုယ်စာ မလုံ့တလုံ မိုးရင်း ရှေ့ဆက်လျှောက် ခဲ့ရပြန်၏။
မိုးကသည်းသည်ထက် သည်းလာတော့ ထီးက လွင့်မတတ်၊ လန်မတတ်။ ခေါင်ကကျသည့် ရေကလည်း မဆုံးနိုင်အောင် တစက်စက်။ ပလက်ဖောင်း အပေါက်တွေကို မနည်းတိမ်းရှောင်ရင်း တယောက်ချင်း သွားမှအဆင်ပြေမည့် ဒီပလက်ဖောင်း လမ်းကျဉ်းလေးထက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပူးတုံ ခွါတုံ သွားနေကြရသည်။ နှစ်ယောက်လုံး၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ကိုယ်တခြမ်းစီမှာ မိုးတွေရွှဲနေမှာ အသေအချာပင်။
“မိုးမရွာလောက်ဘူးထင်ပြီး ထီးကို ထားခဲ့တာ၊ မိုးက ရုတ်တရက်ရွာတော့ ဒုက္ခကို ရောက်ရော၊ ငါ့တူမကြီးလို ဆံပင်တိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ အဒေါ်က ဆံပင်ရှည်တော့ မိုးထိပြီးရင် …. ….. …..”
စသဖြင့် မိုးသည်းထဲမှာ စကားတွေ မစဲအောင် ပြောနေတော့၏။ လမ်းတဖက် ကားဂိတ်ဆီ သူသွားလိုသော နေရာ ရောက်အောင် ပို့ပေးပြီး ကားတစီးပေါ် တက်သွားသည်ထိ စောင့်ကြည့်နေမိသည်။ အပြေးအလွှား ကားပေါ်တက်သွားသူက တချက်ကလေးပင် ပြန်ငဲ့မကြည့်ခဲ့။ ထိုကားထွက်သွားမှ ကိုယ်လိုရာခရီးကို လမ်းဆက်လျှောက် ရပြန်သည်။
ခိုနားသူတို့ သဘာဝဆိုတာ ဤသို့နှင်နှင်ပင်။
နောက်တော့လည်း ဒီအရိပ်မှာ ခဏတာ ခိုဝင်ခဲ့ဖူးပါလားဆိုတာ သတိရချင်မှ ရပေဦးတော့မည်။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အရိပ်ပေါင်းများစွာအောက် နားခိုခဲ့ဖူးသည်၊ ပျော်မွေ့ခဲ့ဖူးသည်၊ ပြီးတော့ လစ်လျူရှုခဲ့ဖူးသည်၊ မေ့လျော့ခဲ့ဖူးသည်။ နောက်ထပ်တဖန် ခိုနားစရာ အရိပ်များ သွားရင်းလာရင်း ထပ်မံ ကြုံတွေ့ရလိမ့်ဦးမည် မဟုတ်ပါလား။
ဒီလိုနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့သော လမ်းတလျှောက်မှာ နေပူထဲရောက်လိုက်၊ အရိပ်အောက်ဝင်လိုက်၊ မိုးသည်းနေ့တွေကို ကြုံတွေ့လိုက်နှင့်ပင် …. မဆုံးတမ်း တရွေ့ရွေ့ ဆက်သွားနေရဆဲ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … လိုရာခရီး မရောက်မချင်းတော့ မလုံ့တလုံ နုံချာလှသော ဒီထီးကလေးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ကာပင် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေရဦးမည်သာတည့်။
၂၁၊ မေ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁ နာရီ ၄၆
Posted by မေဓာဝီ at 3:25 AM5comments
ညက စာအသစ်ရေးမယ်ကြံတုန်း မီးကပျက်သွားတယ်။ အချိန်ကတော့ ည ၁၁ နာရီထိုးနေပါပြီ။ အိပ်မယ်ဆို အိပ်လို့ရနေတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကွန်ပျူတာပိတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်လိုက်တယ်။ အိပ်ရာထဲရောက်ပြီး ခဏနေတော့ မီးကပြန်လာပါလေရော။ မီးပြန်လာပေမဲ့လည်း ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး စာပြန်မရေးချင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာထဲမှာ အိပ်မပျော်ဘဲ လှဲနေရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေပြောပြတဲ့ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်လေးတွေကို သတိရနေမိတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေက ပုံပြင်လေးတွေ အမြဲပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘုရားဟော နိပါတ်တော်တွေကို ပြန်ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်တွေကအစ၊ နိုင်ငံတကာ ပုံပြင်တွေအလယ်၊ ရယ်စရာပုံပြင် .. လံကြုတ် ပုံပြင်တွေအဆုံး ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြတဲ့အခါ ကျမတို့လည်း မမုန်းတမ်း နားထောင်ခဲ့ရတယ်။
ညတိုင်ဆိုရင် … “အဖေ … ပုံပြောပြ” လို့ ဆိုးနွဲ့ဂျီကျ ခဲ့ရတာလည်း အမြဲပေါ့။
ခုတော့လည်း အဖေပြောတဲ့ ကလေး ပုံပြင်လေးတွေနဲ့ ဝေးနေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ တခါတလေတော့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးဘ၀လို အပူအပင်ကင်းကင်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ အိပ်ရာထဲမှာ အဖေပြောလာမယ့် ပုံပြင်လေးတွေ နားဆင်ချင်ပါသေးတယ်။
အဖေ့ပုံပြင်လေးတွေ သတိရရင်း အိပ်ပျော်သွားရာက မနက်မိုးလင်းတော့ ကျမစာအုပ်စင်ပေါ်က အဖေ့မှတ်စု စာအုပ်ဟောင်းလေးကို လှန်လှောရှာဖွေမိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အဖေရေးထားတဲ့ ကဗျာပုံပြင်လေးတွေ ရှိတယ်လေ။ ပုံပြင်တွေကို ကဗျာအဖြစ်ပြန်ရေးထားတဲ့ ကဗျာ ပုံပြင်လေးတွေ ဆိုပါတော့။
အဲဒီကဗျာလေးတွေ အဖေရေးခဲ့စဉ်က ၁၉၇၅ ခု ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဖေက သမီးတွေနဲ့ တကွ ကလေးတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးခဲ့တာတဲ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
“မင်းရဲ့ ဦးခေါင်း ဘေးကင်းစွာ၊
မင်းက ဆပ်ဦး .. ဆပ်ရဦး”
လူမိုက် ..ကျေးဇူး မသိဘူး။ … ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဒီကဗျာလေးကို ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တပုဒ်လိုသာ နားထောင်တတ်ခဲ့ပါတယ်။
လောကမှာ ၀ံပုလွေလို လူစား အများကြီးဆိုတာ … အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ကြုံရ တွေ့ရ သဘောပေါက်လာရပါပြီ။
၀ံပုလွေလို လူစားမျိုးနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ သူ့ခံတွင်းထဲက ကိုယ့်ဦးခေါင်း အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြန်ထွက်နိုင်တာကိုပဲ ….ကျေးဇူးတင်လို့ … သူ့ကို ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် … သတ်မှတ်ရတော့မှာပဲပေါ့။
မနက် ၉ နာရီ ၄၅
Posted by မေဓာဝီ at 4:16 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 7:39 AM7comments
နံနက်ကို ကြို …
မင်္ဂလာနံနက် ဖြစ်ပါစေ … ။
မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်း ပေါင်းများစွာ
ပိုင်ဆိုင်ရပါစေသား … ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေသား … ။
*(ယောနိသော =ယောနိသော မနသိကာရ = သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်း)
Posted by မေဓာဝီ at 4:18 AM 14 comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:07 AM 10 comments
အပိန် အပဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်နေရင်းနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-နှစ် ကျော်ကျော်က ကျမ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးကို ကွန်ပျူတာထဲ ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပြီး ကျမတယောက်ထဲ ရယ်နေမိတယ်။ ကျမ ၀ဋ်လည် တာများလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် … ၀ဋ်ဆိုတာ နောင်ဘ၀ မကူးဘူး၊ လည်ချင်တဲ့အချိန် လည်တတ်တယ် မဟုတ်လား။
၂၀၀၄ ခုနှစ်ဆီက ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှာ တာရာမင်းဝေက “မှားလျှင်ပြင်ပါ” ဆိုပြီး ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး တာရာမင်းဝေကို ကျမက တန်ပြန်ဆောင်းပါး ရေးပြီး ဝေဖန်ခဲ့မိတယ်။ အကြောင်းအရာက အခုဖြစ်နေတဲ့ အပိန် အပဲ့ နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကိုယ်ပြောချင်တာလည်း ပြောရသေး ကိုယ့်စာလည်း ဂျာနယ်ထဲ ပါသေးဆိုတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မော်မော်ကြွားကြွားပေါ့။ အင်း …. ခုတော့ တာရာမင်းဝေနေရာကို ကျမ ရောက်နေပြီလား လို့ ထင်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျမကတော့ တာရာမင်းဝေလောက် sensitive မဖြစ်ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတွေးထဲက ကာဗာလုပ်နေမိသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာလည်း ၀ဋ်လည်ခြင်း တမျိုးပေပဲ။
နားရှုပ်မှာစိုးလို့ … တာရာမင်းဝေရဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ကျမဆောင်းပါး ၂-ပုဒ်လုံးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ကြည့်ပြီး … အာမနာတမ်းသာ ဝေဖန်ကြပေရော့။ မထူးတော့ဘူးလေ … ၀ဋ်လည်မှတော့ ကုန်အောင်သာ လည်ပေရော့ … ခံလိုက်လေမဟဲ့လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
စကန်ဖတ်ထားတဲ့ စာတွေဖတ်မရရင် ရိုက်ထားပြီးသား တင်ပေးပါမယ်။
အဲဒီ ဆောင်းပါး ၂ပုဒ်ကို နေးတစ်ဖိုရမ်မှာလဲ တင်ဖူးပါတယ်။
မမြင်ရလျှင် “ဒီနေရာ”မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 3:52 AM 8 comments
ပေးစာကို မရေးတာကြာလို့ ရွှေစိတ်တော် ငြိုငြင်နေပြီလား မသိဘူး… ။
စိတ်ထဲမှာ ရှိပေမယ့် လက်က မပါနိုင်တာကြောင့် ဒီပေးစာကို ဆက်မရေးနိုင်တာပါ။ ကိုပြူးကျယ်နဲ့တကွ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ချင်လို့ မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ သိရလို့ ကျမ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ဒီနေ့တော့ မဖြစ် ဖြစ်အောင် ရေးမယ်လို့ အားခဲပြီး ရေးလိုက်ပါရဲ့။
ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ် ပြီးတဲ့နောက် တေးရိုးငယ်နဲ့ တေးရိုးကြီး စပ်နည်း အလှည့်ရောက်ပါပြီ။
တေးထပ်ထက် ရှေးကျတာကြောင့် တေးရိုးလို့ ခေါ်ဟန်တူပါသတဲ့။ တေးရိုးကြီးနဲ့ တေးရိုးငယ်ဟာ အနည်းငယ်သာ ကွာတာကြောင့် စာအုပ်ထဲမှာ တပေါင်းတည်း ပြထားပါတယ်။
လေးချိုးကို တပိုဒ်ဖြုတ်ပြီး အနည်းငယ် ပြင်လိုက်ရင် တြိချိုးဖြစ်လာသလိုပဲ တေးထပ်ကို အချို့အပိုဒ်တွေ ဖြုတ်ပြီး ပြင်ဆင်လိုက်ရင် တေးရိုးငယ်-တေးရိုးကြီး ဖြစ်လာတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မနှုန်းတန် စိန္တေယျမို့၊ အနန္တဘုန်းတော်ဂုဏ်၊
မြှောက်ဝှဲချီး အံ့မကုန်သည်၊ မြေ၀သုန် တုနှိုင်း၊
သဗ္ဗညု ထွတ်ဘုန်းသည်ကို၊ ငါဇာနည် ဦးညွတ်လို့ကိုင်း။
စောမြတ်စွာ ထွဋ်ရှိုင်းသည့်၊ မနှိုင်းတန့် တရားတော်၊
ဂိုဏ်းရှစ်ဘို့ သံဃာတော်ကို၊ ရှိပူဇော် ဦးတင်၏လေး။
“ရှေးရေး တန်ခူးလဖွဲ့ တေးရိုးကြီးပုံစံ”
တန်ခူးဂိမှမှာ၊ ဓာတ်တေဇ ယှဉ်မှီ၊
ခါမိဿ အချိန်ညီ၊ သ၀ဏီနက္ခတ်၊
စိတြ မည်မကွာသည်၊ တာရမှာ ကေ၀ဋ္ဋမှတ်၊
ပန်းကံ့ကော် ရင်ခတ်တို့၊ ပွင့်ချပ်ကဲ့စုံလင်၊
သင်းရနံ့ ပျံ့ရွှင်၊ ရေသဘင်ပွဲလမ်း၊
ထိန့်ရိုက်ဆင့် ကျူးကျော်တယ်၊ သင်္ကြန်တော် ကြူးရင့်သည့်တမ်း။ … ။
(တေးရိုးငယ်မှာ ‘လေး’ ဟု တေးထပ်ကဲ့သို့ ချသော်လည်း ဤတေးရိုးကြီးကား အထက်ပိုဒ်က ရှိသော ကာရန်အတိုင်း သံပြင်း လဟုသံနှင့် ချသည်ကို သတိပြုပါ။)
တေးတွဲ့ကဗျာဟာ ခုခေတ်မှာ တိမ်မြုပ်နေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ရေးသားစပ်ဟပ်ရာမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ကဗျာမျိုး ဖြစ်ပါသတဲ့။
တေးတွဲ့ကို အမည်အားဖြင့် ဝေဖန်ရရင်တော့
တေး - ဆိုတာ ကဗျာ သီချင်းဆိုတဲ့ အနက်၊ သင်္ချာ ဂဏန်းအရ ၃- ဆိုတဲ့အနက်ကို ဖော်ပြပြီး
တွဲ့ - ဆိုတာကတော့ လေးကန် ဖင့်နွှဲတဲ့ အနက်ကို ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖြေးနှေး ဖင့်နွှဲစွာ ရွတ်ဆိုရသော ကဗျာ (သို့မဟုတ်) အပုဒ် ၃-ပိုဒ်ဖြင့် ဖင့်နွှဲ ဖြည်းညှင်းစွာ သီဆိုရသော ကဗျာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
တေး - ကို ၃-ခု သင်္ချာယူ၍ တွဲ့ - ကိုတော့ တွဲ (ဆက်တွဲခြင်း) အနက်အဓိပ္ပါယ်လို့ ယူဆပြီး အပိုဒ် ၃-ပိုဒ် ဆက်တွဲ ရေးရတဲ့ ကဗျာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြန်ပါတယ်။
တေးတွဲ့ကို ရေးတဲ့အခါ သုံးပိုဒ် ရေးပြီး အချီအချ တူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပိုဒ် တပိုဒ်မှာ အချိုး ၄-ချိုးစီ ရှိတာကြောင့် ရှေးလေးချိုးကြီး အသွားဆန်ဆန်၊ လေးလုံးစပ်အချို့၊ သံချို အသွားဆန်ဆန် ငါးလုံး,ခြောက်လုံး အချို့ ထားရှိပါတယ်။ အချီမှာတော့ ၃-လုံး ချီနည်းနဲ့ ၄-လုံး ချီနည်း နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နမူနာ တေးတွဲ့ ကဗျာတပုဒ် ကြည့်ရအောင်။
(၁) “ဘုံနန်းက-မှန်းဆ ချေလျှင်”
ဃောသ လေးပြန်၊ ဝေးလောက်တန်တွင်၊ နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလို့၊ တည်သန်းပုံ သဗ္ဗညုလို၊ ရွှန်းနုစုံလင်၊
တက်, သက်,လှေကား၊ နှစ်စုံပွားလို့၊ ထူးခြားသန့်ရှင်း၊ ဘိုးတော်မင်းထက်၊ ဉာဏ်လင်းအင်၊ မမြင် တောင်းပေရသေး။
စူဠာမဏိ၊ မည်တော်ရှိတဲ့၊ သီရိထွေငေါ်၊ စေတီကျော်ကို၊ ပြည်တော်သူ သွတ်လှယ်ကူးလို့၊ ဖူးကြတယ်လေး။
(၂) “ထုံပန်းလှ-ပန်းက ထွေအင်”
ဆွမ်းတော် ရေကြည်၊ ပွဲရံတည်သား၊ တီးစည် ခတ်ရွမ်းလို့၊ ရောင်လျှမ်း အရုဏ်ခပ်လျှင်၊ ဆွမ်းကပ်လို့တင်၊
တန်ဆောင်တိုင်များ၊ ရေတော်ငါးနှင့်၊ နံပါး ပန်းသင်း၊ ညနေခင်းမှာ၊ ထပ်သွင်းတင်၊ ရင်ပြင်တော် လင်းထိန်လို့ မွှေး။
ရှင်လူကစ၊ နံနက် ညတိုင်း၊ ညွတ်ခ ပူဇာ၊ စိန္တေယျာဝယ်၊ မသေရာ နိဗ္ဗာန်နန်းကို၊ မှန်းဆုပန် လေး။
(၃) “စုံဆန်းစွ- ခန်းဝဗွေပြင်”
ကျောင်းတော် အုတ်ဂူ၊ အဆူဆူတွင်၊ နိဗ္ဗူရည်စူးတဲ့၊ ထေရ်ထူးတွေ ကိန်းပျော်ဝပ်တယ်၊ ကွက်လပ်မမြင်၊
တကျောင်းတော်လုံး၊ ရေကြည်သုံးဖို့၊ ပတ်ကုံးရှင်းလင်း၊ တောင်တူးရွင်းက ရေသွင်းလျှင်၊ ကန်တွင် ရေပန်း လျှံလို့ဖွေး။
သောတုဇန၊ စာသင်စ၍၊ ထေရအရာ၊ မြတ်သံဃာတို့၊ ချမ်းသာစွာ မြတ်တရားကို အားထုတ်ကြလေး။ … ။
ဆိုတဲ့ အချီ ၃-ပိုဒ် ကာရန်ညီ ပိုဒ်စုံရတု ကဲ့သို့ စပ်ဆိုထားပါတယ်။ အချီ ၃-ပိုဒ်လုံးကို က-လှ-စွ ဆိုတဲ့ လဟုသံ နဲ့ ချီထားပြီး လျှင်၊ အင်၊ ပြင် ဆိုတဲ့ ဂရုသံ နဲ့ ချထားပါတယ်။
နောက်အပိုဒ်တွေကို ကြည့်ရင်လည်း ရှေးလေးချိုးကြီး ရေးစပ်သလို လေးလုံးစပ်မျိုး အပြင် ငါးလုံး,ခြောက်လုံး သင့်သလို ထည့်ပြီး စပ်ဆိုသွားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမချိုးရဲ့ အချနဲ့ ဒုတိယချိုးရဲ့အချမှာ သံလျော့ သံချင်း ညီစေပြီး တတိယချိုးနဲ့ စတုတ္ထချိုးကို (ဧး =အေး) ကာရန်နဲ့ ဆုံးစေရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ တေးတွဲ့တပုဒ်လုံးရဲ့ အချဖြစ်တဲ့ စတုတ္ထချိုးရဲ့ အဆုံးမှာ (လေး) သဒ္ဒါနဲ့သာ အမြဲ ချရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တေးတွဲ့မှာ လေးချိုးလိုပဲ တတိယချိုး၏ ဆုံးခါနီးပိုဒ်မှာ ပထမချိုး၊ ဒုတိယချိုးကို ပြန်ငဲ့တဲ့ ကာရန်ပြန် တချက်စီ ရှိရပါသေးတယ်။
ပထမပိုဒ်မှာ လျှင်-လင် .. ဆိုတာကို (ဉာဏ်လင်းအင် က) အင် နဲ့ ပြန်ငဲ့တယ်။
ဒုတိယပိုဒ်မှာ အင်-တင် … ဆိုတာကို (ထပ်သွင်းတင် က) တင် နဲ့ ပြန်ငဲ့တယ်။
တတိယပိုဒ်မှာ ပြင်-မြင် .. ဆိုတာကို (ရေသွင်းလျှင် က) လျှင် နဲ့ ပြန်ငဲ့တယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ တေးတွဲ့က အချီ ၃-ပိုဒ် ညီပြီး အချမညီတဲ့ တေးတွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အချီအချ ညီတဲ့ တေးတွဲ့ နမူနာကတော့ …
လက်ညောင်းနေပြီမို့ …. သည်းခံကြပါလို့ပဲ …. ။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ ဒီပို့စ်ကို စောင့်ဖတ်တဲ့ မြန်မာကဗျာချစ်သူများ … ဒီတပတ်တော့ ဒီမျှနဲ့သာ ကျေနပ်ပေးကြပါတော့ရှင် …ရှေ့တပတ်လည်း တခြားစာ တင်စရာရှိလို့ ဒီပို့စ်ကို ခွင့်ခဏ ယူပါဦးမယ်။
၁၆၊ မေ၊ ၂၀၀၇
နံနက် ၁၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 5:28 AM2comments
ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ကျွန်တော့အဖေ့ ကသေသေခြာခြာ ကွဲပြားအောင် စလုံး နဲ့ ဆလိမ် အသံကို ထွက်ပြပြီး အသံထွက်ပြင်ပေးပါတယ်..ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အဖေ့အသံကိုကွဲပြားအောင် နားမထောင်နိုင်ဘူး.. အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်...အခုထက်ထိ ပါပဲ .. ဘယ်သူ့ကိုသွားမေး သူတို့ရဲ့အသံကို အတူတူသာကြားပါတယ်.. နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချလိုက်ရတာကတော့ ကွဲပြားအောင်နားမထောင်နိုင်လို့ ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကွဲပြားအောင် မပြောနိုင်တာလို့ထင်ပါတယ်...ကျွန်တော့အထင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဗမာစာလုံးတွေက ရှုပ်ပါတယ်.. စလုံးရှိနေရင်... ဘာလို့အသံထွက်တူတဲ့ ဆလိမ်ကို ရှုပ်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ရတာလဲ..နကြီးရှိတယ် နငယ် ရှိတယ်၊ ဂကြီးရှိတယ် ဂငယ်ရှိတယ်၊ ဘာလို့ က ကြီး ရှိပြီး ကငယ် မရှိတာလဲ..ဘကို ကုန်းလို့တစ်မျိုး ဘကို အထက်ကချိုင့်လို့တဖုံ..ဒဒွေး(တွေး)နောက်ပြီး ဒအောက်ချိုင့်(ဓ)သရှိတယ်၊ သကြီး... (အက္ခရာ ၃၃ လုံးထဲမပါဘူး)ရ ကို ပဲ ကောက်လိုက်၊ ယကို ပက်လက်လုပ်လိုက်နဲ့ဇကွဲ ကို ဇမျင်(မြင်၊ မျဉ်း)ဇွဲ(ဆွဲ)... ဒါမှမဟုတ် စလုံး ရပင့်လား (သဝေထိုး စလုံး ရပင့် ဝေးစနှစ်လုံးပေါက် -ဈေး။ သဝေထိုး ဇမျဉ်ဇွဲ ဝေးစနှစ်လုံးပေါက် - ဈေး)ရှုပ်ကို ရှုပ်ပါတယ်.. လမ်းဂွေ့ရ်ှတွေမှာ အရေးကြီးတာ က ဆိုလိုရင်းကို အဓိပါယ်ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြနိုင်ရင် ပြီးတာပဲ..ဆင်ပလီဖိုင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်..
အင်း...နောက်တစ်ခု စဉ်းစား မိလို့...စာတို့ စကားတို့ ဆိုတာက တဖြည်းဖြည်း နဲ့ အချိန်ကာလကြာရှည်စွာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာကြတာပဲ... အင်းအခုကြမှ အတင်းအကျပ် မပြောင်းလဲနဲ့ ပြောင်းလဲရင်မှားတယ် ဆို .. စဉ်းစားစရာပါ...ဘယ်လောက်မြန်မြန် အများစုက လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ ခေတ်ကာလ အခြေအနေပေါ်မှာမူတည် မယ်နဲ့တူတယ်..အများစု ကလက်ခံနိုင်သွားရင် တော့ မှန်သွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ်..
ပိစိရဲ့ အထက်ပါ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး .. ကျမ အီလည်လည် ဖြစ်သွားတယ်။
ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိအောင် နှုတ်ဆွံ့သွားတယ်။ အဲ … မဟုတ်ဘူး … ဘာရေးလို့ ရေးရမှန်း မသိအောင် လက်တွန့်သွားတာ။ နောက်တော့ … အင်း …. ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ် လို့သာ ကျမ ဖြေတွေးလိုက်တယ်။ ပိစိ စဉ်းစားလည်း စဉ်းစားချင်စရာပေါ့။ ဒီလို စဉ်းစားတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ (ဒါမှလည်း ရှင်းပြခွင့်ရမယ်လေ။)
ဒါတွေဟာ အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်လာရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျမ လေ့လာမိသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင်
ထုံးစံအတိုင်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောမှ ဖြစ်မှာမို့ … ဖတ်သူများကို အားတော့နာပါရဲ့။ သို့ပေသိ တတ်နိုင်ဘူး။ ဖတ်ထားသည့်စာ မနေသာတော့လည်း ဟိုသည် ကိုးကားပြီး ရေးလိုက်ရပြန်ပြီပေါ့။
“ဝေါဟာရ အစ အသံက”
ဝေါဟာရစကား ဖြစ်လာပုံဟာ သဒ္ဒ လို့ ခေါ်တဲ့ “အသံ” ကြောင့်ပါတဲ့။
အသံဖြစ်ကြောင်း ၄-မျိုး ရှိပါတယ်။
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသံ၊ ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသံ၊ စိတ်ရဲ့ အထောက်အပံ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့အသံ နဲ့ ဥတုရဲ့ အထောက်အပံ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့အသံ ရယ်လို့ ၄-မျိုးရှိတယ်။
ကျမတို့ နေ့စဉ် စကားပြော နေကြတဲ့ အသံဟာ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသံပေါ့။ မိုးခြိမ်းသံ လေတိုက်သံ တို့ကတော့ ဥတုကြောင့်၊ စောင်းသံ, ပုလွေသံ စတာတွေကတော့ စိတ်ရဲ့ အထောက်အပံ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး လေတိုက်ခတ်လို့ သစ်ရွက်အချင်းချင်း ထိခတ် မြည်တဲ့အသံကတော့ ဥတုရဲ့ အထောက်အပံ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသံတွေ အသီးသီး ဖြစ်ကြပါသတဲ့။
“အက္ခရာ ဆိုတာ …”
အဲဒီလို ဖြစ်လာတဲ့ အသံတွေ မပျောက်မပျက် တည်နေရအောင် ၀ါးပေါ်မှာ၊ ဖယောင်းပေါ်မှာ၊ သားရေပေါ်မှာ၊ ကြေးပြား ရွှေပြားတွေပေါ်မှာ၊ အုတ်ခွက်,ပေ, ပရပိုက် စတဲ့ ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ အမှတ်သညာ ရေးထိုး ထားကြပါတယ်။ ဒီအသံတွေကို ရေးထားတဲ့ သညာ အမှတ်အသားကိုပဲ အက္ခရာလို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အက္ခရာ ဆိုတာ “မကုန်ခမ်းနိုင်သော” .. လို့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဘယ်လို မကုန်ခမ်းနိုင်တာလဲ … ဆိုရင် ခုန ပြောခဲ့တဲ့ အသံတွေ စကားတွေ၊ လောကမှာ ရှိရှိသမျှ အရာဝတ္ထု အစုစုတွေကို ရေးမှတ်သော်လည်း မကုန်ခမ်း နိုင်ဘူးတဲ့။
“ဗျည်း နဲ့ သရ”
ဗျည်းကို သရနဲ့ ပေါင်းမှ အသံထွက်ပါတယ်။ က+အ = က့ ဆိုတဲ့ အသံထွက်တယ်။
က + အာ = ကာ .. စသဖြင့်ပါ။ ဗျည်းတခုတည်းရဲ့ အသံက တိုလွန်းလို့ မပီသပါဘူး။ မထင်ရှားဘူး။ ဒါကြောင့် သရနဲ့ တွဲရပါတယ်။
“က-ခ နှင့် အခြားဘာသာစကား”
ကကြီး-ခကွေး-ဂငယ်ဆိုပြီး (ကြီး၊ ကွေး၊ ငယ် လို့ ထည့်သွင်း) ရွတ်ဖတ်ခြင်းကတော့ မြန်မာဘာသာ မှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဠိမှာ … က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င လို့သာ ရွတ်ဖတ်ပြီး သီဟိုဠ်မှာတော့ ကယာန၊ ခယာန၊ ဂယာန လို့ရွတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ တမိလ် ဘာသာမှာဆိုရင် ကနာ၊ ခနာ၊ ဂနာ .. တဲ့။ ဗင်္ဂါလီဘာသာမှာကတော့ ကော၊ ခေါ၊ ဂေါ .. လို့ ရွတ်ဖတ်ပြီး မွန်ဘာသာမှာတော့ ကဲ့၊ ခဲ့၊ ဂဲ့ စသည်ဖြင့် ရွတ်ဖတ်ကြပါသတဲ့။ ထိုင်းမှာတော့ ကောကိုင်၊ ခေါခိုင် လို့ ရွတ်ဖတ်တယ်လို့ ကိုသက်ဦးက ကွန်မန့်ထဲမှာပြောဖူးတယ်။
“က-ကြီး လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်”
က-ကြီးလို့ ဘာလို့ ခေါ်ရတယ် ဆိုတာတွေကို “ကျမနှင့်ကကြီး ခကွေး ပို့စ်” မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ ဂငယ် နဲ့ ဃကြီးမှာ ငယ်ခြင်း ကြီးခြင်းဟာ အရွယ်အစားကို ပြောတာ ဖြစ်ပေမယ့် ကကြီးမှာတော့ အရွယ်အစားကြီးခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးဆုံးစာလုံး (ဦးဆောင်သူ)ဖြစ်တဲ့အတွက် “ကြီး” ဆိုတဲ့ ၀ိသေသန ထည့်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဥပမာ - ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရာရာ ဦးဆောင်သူကို ရပ်ကွက်လူကြီး ခေါ်သလိုပေါ့။ ရပ်ကွက်လူကြီး ခေါ်တိုင်း အသက်/အရွယ် ကြီးချင်မှလည်း ကြီးမယ် မဟုတ်လား။
“အသံကို အက္ခရာဖြင့် သရုပ်ဖော်ခြင်း”
ဒီတော့ အစကို ပြန်ကောက်ရရင် … အမျိုးမျိုးသော အသံတွေကို စာနဲ့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာ နားလည်အောင် ရေးပြဖို့အတွက် အက္ခရာတွေကို တီထွင် လာကြတာပါ။ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆို နေကြတဲ့ အသံတွေကို မှီအောင် ဒီဗျည်းတွေ သရတွေနဲ့ ရုပ်လုံးဖော်ကြတယ်။
အသံမှာ အရှည်-အတို၊ အလေး-အပေ့ါ၊ အလျော့-အတင်း .. စသဖြင့် (၁၀) ပါး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ အားလုံးကို မပြောတော့ဘဲ … အလျော့-အတင်း ဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ရအောင်။
တချို့ အက္ခရာတွေရဲ့ အသံကို မာမာတင်းတင်း ရွတ်ဖတ်ရပါမယ်။
ဘယ်အက္ခရာတွေလဲ ဆိုတော့ …
(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င
စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည (စသည်ဖြင့် စီတန်းရေးတဲ့အခါ နံပါတ် ၂ နဲ့ နံပါတ် ၄ အက္ခရာတွေဖြစ်တဲ့) ခ၊ ဃ၊ ဆ၊ ဈ၊ ဌ၊ ဎ၊ ထ၊ ဓ၊ ဖ၊ ဘ တို့ပါပဲ။
သံဃာတော်တွေ ကမ္မ၀ါဖတ်တဲ့အခါ သတိထား နားထောင်ကြည့်ရင် …. “သံဃော” ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဃော ကို မာမာတင်းတင်း ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ .. မှာလည်း .. ဗုဒ်ဓမ် (ဓမ်ကိုတင်း) သရဏံ ဂစ်ဆာမိ (ဆာ ကိုတင်း)ပြီး ရွတ်ဖတ် တာကို ကြားနိုင်ပါတယ်။
ကျန်အက္ခရာတွေကို ဖတ်ရာမှာတော့ သံလျော့ နဲ့ ဖတ်ရပါမယ်။ ကျန်အက္ခရာ ဆိုတော့ နံပါတ် ၁၊ ၃၊ ၅ ခုမြောက် အက္ခရာတွေ ဖြစ်တဲ့ က၊ ဂ၊ င၊ စ၊ ဇ၊ ည၊ ဋ၊ ဍ၊ ဏ၊ တ၊ ဒ၊ န၊ ပ၊ ဗ၊ မ တို့ပါပဲ။
ဒါကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် … ဂ ငယ်နဲ့ ဃကြီး၊ စလုံး နဲ့ ဆလိမ် အသံထွက်ပုံ ကွာခြားချက်ကို သိနိုင်ပါပြီ။ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင်္ဂါကို သံဃာ လို ဃကြီးသံနဲ့ ဖတ်ဖို့မလိုပါဘူး။
“ဒီမှာစား” ဆိုတာနဲ့ “ဒီမှာ ဆား” ဆိုတာနဲ့လည်း အဓိပ္ပါယ်ချင်း မတူသလို အသံထွက်ချင်းလည်း မတူပါဘူး။
နောက်တခါ အက္ခရာ ဖို မ ဆိုပြီးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ခုနကလို နံပါတ်နဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် အက္ခရာ နံပါတ် ၁၊ ၃၊ ၅ က ဖိုဖြစ်ပြီး ၂ နဲ့ ၄ က မ-ဖြစ်ပါတယ်။
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င (က၊ ဂ၊ င = ဖို) (ခ၊ ဃ = မ) ကျန်အက္ခရာတွေ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။
စာလုံးပါဌ်ဆင့်တွေ ဆင့်တဲ့အခါမှာ ….
* ဖို အချင်းချင်း ဆင့်ခွင့်ရှိတယ်။ မ-အချင်းချင်း ဆင့်လို့မရပါ။
ဥပမာ - က္က၊ ဂ္ဂ (က ၂-လုံးဆင့်၊ ဂ ၂-လုံးဆင့်) ခ နဲ့ ဃ ကို ၂-လုံးဆင့်လို့ မရပါဘူး။ နောက်ဆုံး င-ကတော့ အားလုံးပေါ်မှာ ဆင့်လို့ရပါတယ်။ ဆင့်တဲ့အခါ -င်္ (ကင်းစီး) အနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းပြီး ဆင့်ပါတယ်။ ၀င်္ကပါ၊ သင်္ခါရ၊ အင်္ဂါ .. စသည်။
* မ-က ဖိုရဲ့ အောက်မှာ သွားဆင့်ရတယ်။ ဆင့်တဲ့အခါမှာ ၁-အောက်မှာ ၂-သာဆင့်ရတယ်၊ ၃-အောက်မှာ ၄- သာ ဆင့်ရပါတယ်။
ဥပမာ .. အက္ခရာ၊ အနဂ္ဃ .. စသည်။
ဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ဃကြီး ဏကြီး စသည်တို့ဟာ အပိုသက်သက် ထည့်ထားခြင်း မဟုတ်ဘူး၊ တခုနဲ့ တခု ကွာခြားတယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
သကြီး “ဿ” ဆိုတာကတော့ သ နှစ်လုံးကို ဆင့်ထားတဲ့ ပါဌ်ဆင့်ဖြစ်တယ်။ သူက အက္ခရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒါကြောင့် ဗျည်း ၃၃ လုံး ထဲ မပါရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ပိစိ သဘောပေါက် မလား၊ ပိုပြီးတော့ပဲ ရှုပ်ထွေးသွားမလား မပြောတတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆို ဒီ့ထက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အချိန်မရတာက တကြောင်း၊ ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့ မှာစိုးတာက တကြောင်းမို့ ပိစိရဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး လောက်သာ ဆွဲယူရှင်းပြထားတာပါ။ ဒါတောင် တော်တော် ရှည်လှပြီ။
တလက်စတည်း … ဒီနေရာမှာ … စာဖတ်ခြင်း စာရေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ကိုးကားပါရစေဦး။
ရှေးရှေးအခါက အက္ခရာ အရေးအသား၊ စာအရေးအသား မပေါ်သေးလေတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် နားလည်မှုအတွက် နှုတ်ပြောစကားသံဟာ အရေးကြီးခဲ့မှာပါပဲ။ ကိုယ်ပြောလိုတာကို ပီပီသသနဲ့ ပြောနိုင်မှ တဖက်သားက နားလည်မှာပဲ။
နောက် အက္ခရာ အရေးအသား ပေါ်လာတဲ့အခါ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတဲ့ ရေးထုံးစည်းမျဉ်းတွေ ပေါ်လာရပါတယ်။ အဲဒီရေးထုံး စည်းမျဉ်းတွေ သတ်ပုံအတိုင်း ရေးပါမှ လိုရာအနက် ပေါက်ပြီး တဖက်သားက နားလည်မှာပါပဲ။ ဥပမာ မြို့ဝန်ကို နသတ်ရေးရမှာ သေးသေးတင်နဲ့ ရေးရင် မြို့ဝန် မဖြစ်တော့ဘဲ တောက ၀ံသတ္တ၀ါ ဖြစ်ရမှာပါပဲ။
အဲဒီတော့ အက္ခရာပေါ်တဲ့ ခေတ်ကျတော့ တဦးနဲ့ တဦး ဆက်ဆံရာမှာရော အတွေးအခေါ် အကြံဉာဏ်တွေကို ဖလှယ်ကြရာမှာရော နှုတ်မြွက်စကားကိုချည်း မသုံးဘဲ အရေးအသားနဲ့လည်း ကိစ္စပြီးနိုင်တာမို့ ရေးထုံးဥပဒေတွေကို အလွန်ပဲ အလေးပြု ဂရုစိုက် ကြရပါတယ်။
ဥပမာ ပိဋကတ် သုံးပုံဟာ မြန်မာပြည်၊ ထိုင်း အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ပျံ့နှံ့လာရာမှာ နှုတ်ပြော စကားကြောင့် သက်သက်မဟုတ် အက္ခရာ အရေးအသားကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အက္ခရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရေးတတ်ကြဖို့ ရှေးက အလွန်ပဲ ကြိုးစားအားထုတ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပါဠိသဒ္ဒါ ကျမ်းတွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
နောက် ကျွန်တော်တို့ခေတ် ရောက်လာတော့ ပုံနှိပ်စာလုံးနဲ့ ပုံနှိပ်စက်က ရှိလေတော့ အရေးအသားဟာ သိပ်ပြီး တိုးတက်များပြား လာပါတယ်။ ရေဒီယို အသံလွှင့်နည်း အသံဖမ်းနည်းတွေ ထွန်းကားလာပြန်တော့ ဟောချက် ပြောချက် သတင်းလွှင့်ချက် ဆိုတဲ့ နှုတ်ပြော အသံတွေဟာလည်း တနေ့လုံးလိုလို လေထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုခေတ်မှာ ရေးထုံးမူမှန်သာ အရေးကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောထုံးမူမှန်ဟာလည်း အရေး အလွန်ကြီးလာပါတယ်။
အခုခေတ် အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ အသံလွှင့်တာကို ကြည့်ပါဦး။ ဘီဘီစီကလည်း လွှင့်ပါတယ်။ နယူးဒေလီကလည်း လွှင့်ပါတယ်။ ဘီဘီအက်စ်ကလည်း လွှင့်ပါတယ်။ တခြားနေရာ အများကလည်း လွှင့်ပါတယ်။ အဲဒီလွှင့်တဲ့ လူတွေဟာ ဘီဘီစီက စံပြအသံကို နမူနာထားပြီး မတူတူအောင် ကြိုးစားပြောဆိုကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အသံထွက်ချင်း မတူရင် လူနားအလည် လွဲမှာစိုးလို့ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ပြောထုံးမူမှန်ဟာ အခု အထူးအရေးကြီး လာပါတယ်။ အခု ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မြန်မာစကားဟာ ရုံးသုံးစကား ဖြစ်တဲ့အတိုင်း လွှတ်တော်၊ ရုံးတော်၊ ကျောင်းကြီး ကျောင်းငယ်များမှ စပြီး အသုံးပြုနေရတဲ့ စကားဖြစ်လေတော့ ပီပီသသ ဌာန် ကရိုဏ်းကျကျ ဆိုတတ်၊ ပြောတတ်၊ ရွတ်တတ်၊ ဖတ်တတ်ပါမှ လိုရာအကျိုး ပြီးစီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ပိစိရဲ့ ကွန်မန့်ကို ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် … ပိစိ ဘာကြောင့် အဲဒီလို စဉ်းစားမိတာလဲ … ။ အားမနာတမ်း ပြောရရင်တော့ မူလ ဘူတ အခြေခံကို မသိလို့ စဉ်းစားမိတယ်လို့သာ ပြောပါရစေတော့။ မသိလို့ ဆိုတာကတော့ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မသိရင် သိအောင် လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ (သိလျက်နဲ့တော့ ခုလို မပြောတန်ကောင်းဘူး ထင်ပါရဲ့)
ဒါကြောင့် မြန်မာစာ ရေးဖတ်နေကြတဲ့ သူတိုင်းဟာ မြန်မာစာပေရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ကကြီး ခကွေး အက္ခရာတွေကို သေချာစွာ လေ့လာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယပင့်၊ ရရစ်၊ ၀ဆွဲ၊ ဟထိုး .. အဲဒါတွေကိုလည်း ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာ သိသင့်တယ်။ တော်တော်များများ မှားရေးတတ်ကြတာ ခဏခဏ ဖတ်နေရလို့ပါ။ ရပင့်၊ ရရစ်၊ ၀က်ဆွဲ၊ ဟတ်ထိုး တဲ့။
အဲဒီလိုတွေ ရေးကြ ပြောကြတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ပညာတတ်တွေချည်း ပါပဲ။ ဒီတော့ ဒါတွေဟာ အမှားကြာရင် အမှန်ဖြစ်သွားမှာလား။ ပညာတတ် အများစုက လက်ခံတာနဲ့ အမှန်ဖြစ်သွားရောလား။
ဆရာမ မစန္ဒာ ရဲ့ ၀တ္ထုထဲကလို မြန်မာစာကို ဖျက်သူဟာ မြန်မာတွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက် မပျက်ယွင်းရအောင် တယောက်တလက် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ကျမတို့ရဲ့ မြန်မာစာပေဟာ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ စာပေ ဖြစ်ပါတယ်။ သေးသိမ်နုတ်ညံ့တဲ့ စာပေ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ်အောင်လည်း ပြောင်းလဲ မပစ်ကြပါနဲ့။ စာတို့ စကားတို့ဟာ အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲတတ်တယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲရာမှာ မူရင်း မပျောက်ပျက် စေဖို့နဲ့ ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းသာ ဖြစ်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစာပေ မြင့်မားအောင် မလုပ်ဆောင်ချင် နေပါ၊ ပျက်စီးအောင်တော့ မဖျက်ဆီးပစ်ကြပါနဲ့လို့ ကျမ တောင်းပန်ရင်း … ဒဂုန်ဦးစန်းငွေရဲ့ စာပိုဒ်လေးနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ … ။
“မြန်မာစာသည် တို့စာ၊ မြန်မာစကားသည် တို့စကား ဟု ဆိုကုန် ကြွေးကြော်ကြကုန်သည်။ နီတိ ဆောင်ပုဒ် ထုတ်ကြကုန်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်နှင့် ညီအောင် မင်္ဂလာကျက်သရေ တင့်ဖြိုးဝေလှသော တို့စာ၏ ရေးထုံး ရင်းမြစ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြောထုံး ဖတ်ထုံး ရင်းမြစ်ကိုလည်းကောင်း စနစ်တကျ သိရှိကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစား၍ လေ့လာဆည်းပူး အားထုတ်အပ်၏။”
(၁) ဒဂုန်ဦးစန်းငွေ၏ သဒ္ဒါကိုလေ့လာခြင်း။
(၂) ဟံသာဝတီဦးဘရင်၏ မြန်မာစာအခြေပြ။
(၃) မင်းသုဝဏ်၏ ပန်းနှင့်ပင်စည်။
(၄) ကိုသက်ဦး၏ ကွန်မန့်။
Posted by မေဓာဝီ at 3:32 AM 58 comments
၁၉၉၆ ခုနှစ်က ကျမမောင်လေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ကဗျာစာအုပ်လေး တအုပ် ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့မွေးနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ “အသုံးမ၀င်တော့သော” ကဗျာက အဲဒီ စာအုပ်လေးထဲကပါ။ အဲဒီကဗျာကို ကြိုက်လို့ ဂျာနယ်ထုတ်တုန်းက ပြန်ပြီး သုံးခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ် ဆိုရမလားတော့မသိဘူး အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ သူ့ကဗျာ ၃-ပုဒ် လုံးကို ကျမကြိုက်ပါတယ်။ “အသုံးမ၀င်တော့သော” ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး ပေါ့။
အခုဖော်ပြမယ့် နောက်တပုဒ်ကတော့ “မှားယွင်းမှု အစစ်အမှန်များ” … တဲ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
နားနဲ့မဆန့်လို့ လျှံကျလာတဲ့အထိ … ။
ချူချာနေတဲ့ ဂီလာနဆေးသား တချို့ကတော့
ပက်ကြားအက်နေလေရဲ့ … ။
ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်သွားခဲ့ … ။
ဆေးသားမဲ့ ပန်းချီကားတချပ်ဟာ ..
အစစ်ဖြစ်သွားတယ် … ။ … ။
(အလုပ်မအားလို့ စာအသစ် မရေးနိုင်တာနဲ့ မောင်လေးကဗျာနဲ့ ခုလို အကြံအဖန် လုပ်လိုက်ရတာပါ။)
Posted by မေဓာဝီ at 4:07 AM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 1:08 PM9comments
မင်းရဲ့ ရုပ်သွင် ဦးဆုံးမြင်ချိန်မှာ
မှောက်ရက် ..လေးဘက် ..
အဖေနဲ့ အမေ သဲသဲလှုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းကို
တခါတလေ မနာလို ဖြစ်ပေမယ့်
ချစ်လျက်ပါပဲ သားငယ် … ။
ကကြီး ခကွေး .. မင်းကို ငါသင်ပေးတော့
စိတ်တိုလျက်နဲ့ ရယ်ခဲ့မိသေးတယ် .. ။
သွေးချင်းကတော့ နီးလျက်ပါ သားငယ် …
မင်းရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေ …
ခုထိအောင် အလွတ်ရဆဲလေ .. ။
ကဲ … သားငယ်
ငါနှစ်သက်တဲ့ မင်းကဗျာတပုဒ် တင်လိုက်ပါရစေ … ။
မင်းရဲ့ဘ၀လမ်းကို ဖြောင့်ဖြူးစွာ လှမ်းလျှောက်နိုင်ပါစေကြောင်း
ငါဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့ … ။ … ။
ဒီကနေ့က ကျမနဲ့ အဝေးကြီးမှာရောက်နေတဲ့ ကျမရဲ့ တဦးတည်းသော မောင်လေး မွေးနေ့မို့ … သူ့ကဗျာလေးကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 6:06 AM9comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:03 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:45 AM2comments